Compress pdf: barnaamijyada iyo websaydhada si loo yareeyo miisaanka pdfs | Abuurista khadka tooska ah
Isku soo ururi pdf
Encarni Arcoya | 06/06/2021 08:46 | La cusbooneysiiyay 31/05/2021 13:05 | Tababarada
Ka soo qaad in aad diyaarinaysay dukumiinti iyo in markii aad keydineysay aad ku sameysay qaab PDF ah. Way kugu habboonayd adiga, oo leh miisaskeeda, tirakoobyadeeda, sawirradeedii iyo qoraalkeedii wax walba sharraxayay. Laakiin markii ay timaado waqtigii la rar lahaa, waa wax laga naxo! Aad ayey u kacsan tahay. Xaqiiqdii mar uun waad la kulantay xaaladan oo waa inaad la timaaddaa si ay u cadaadiyaan PDF oo markaa awoodi karaan inaad ugu diraan qofka imaan doona.
Haddii aad isku aragtay inaad ka muuqato xaaladdan oo ay tahay wax adiga kugu soo kordhay, ama adiga kugu dhacaya badanaa, haysashada qalab aad ku cadaadin karto PDF waa mid aad muhiim u ah. Sidaa darteed, halkan waxaan ka hadlaynaa xoogaa xalal ah dhibaatadan aad haysato.
1 Isku cadaadi PDF si fudud
2 Ku cadaadi PDF barnaamijyada
2.1 Jsoft PDF Khasaaraha
2.2 Kombaresarada PDF
3 Ku cadaadi PDF-ka khadka tooska ah
4 Ku cadaadi PDF on Android ama iOS
Isku cadaadi PDF si fudud
Waxaa jira adeegyo badan oo, markaad diraysid dukumiintiyada, xaddidaya cabbirkooda taasna waxay kaa dhigeysaa inaad isticmaasho nidaamyo kale si aad ugu dirto. Laakiin haddii aadan rabin inaad u soo dirto macmiil xiriiriye oo aad siiso "sawir xun" inuu isaga aado degel kale si uu u soo dejiyo dukumiintiga uu codsaday, ikhtiyaarku waa inuu cadaadiyo PDF.
Tani maahan wax adag sida ay umuuqato, waxayna kuxirantahay tayada aad rabto inaad siiso dukumiintiga ugu dambeeya, iyo sidoo kale waxa barnaamijku oggol yahay, waxaad awoodi doontaa inaad iskaa u caawiso iyaga. Dabcan, waxaad haysataa dhowr ikhtiyaar, labadaba barnaamijyo iyo bogag internet oo kaa caawin doona inaad yareyso cabirka pdf-kaas. Ma waxaad rabtaa inaan qaarkood kugula talinno?
Ku cadaadi PDF barnaamijyada
Jsoft PDF Khasaaraha
Kani waa mid kamid ah barnaamijyada ugu horeeya ee aan kugula talineyno, waana sameynay sababta oo ah, marka lagu daro waxa magaceeda tilmaamayo, oo ah soosaaraha PDF, sidaa darteedna waxaad ku qasbeysaa PDF oo aad yareyn doontaa cabirkiisa, waxay kaloo kuu ogolaaneysaa inaad isku darto dhowr PDFs isla waqtigaas ama xitaa laba u kala saar. Laakiin waxaa jira waxyaabo intaa ka badan: waad tirtiri kartaa bogagga, waxaad ku dari kartaa calaamado, dib u habeyn ku sameyn kartaa bogagga, iwm.
Dhibaatada kaliya ayaa ah in lagu heli karo oo kaliya Ingiriis iyo Faransiis, laakiin way fududahay in lala shaqeeyo, xitaa haddii aad fahmayso Ingiriisiga aad u yar.
Xaaladdan oo kale, barnaamijkani wuxuu diiradda saarayaa kaliya hal hawl, oo lagu cadaadiyo PDF. Dabcan, waad isku cadaadin kartaa mid mid ama qaybo. Intaas waxaa sii dheer, way taagan tahay maxaa yeelay inkasta oo ay wax badan cadaadinayso oo dhaqso badan, taasi macnaheedu ma aha in tayada ama qaabku lumayaan, taas oo aad loo mahadiyo.
Hadda, hoos u dhaca ayaa ah in la bixiyay. Waxaa jira nooc bilaash ah, oo aad isticmaali karto, laakiin wuu ka xadidan yahay midka la bixiyay, wuuna kugu saameyn karaa marka loo eego xaddiga miisaanka, markaad cadaadinayso, iwm. Luqadda, waxaad kuheli kartaa oo keliya Ingiriis, laakiin si fiican ayaa loo fahmay.
Haddii aad u baahan tahay riixitaan caddaalad ah oo sarreeya, illaa 95%, ka dib isku day inaad isticmaashid doorashadan. NXPowerLite Desktop waa barnaamij leh qaab aad u fudud oo si fudud loo isticmaali karo. Intaas waxaa sii dheer, waad ku dari kartaa feylal ama fayl aad ku cadaadin karto, taas oo aan ku istaagin kaliya PDF-yada laakiin waxay ku siineysaa fursado badan oo aad kala dooran karto.
Markaad soo dejineyso, waxaad awoodi doontaa inaad doorato dhowr nooc, oo ku saleysan waxaad u baahan tahay, sidaasna kuma waayi kartid booska ku yaal darawalkaaga adag haddii aadan si buuxda ugu baahnayn.
Ku cadaadi PDF-ka khadka tooska ah
Haddii aadan rabin inaad soo dejiso wax dhibaato ah oo ay tahay inaad ku rakibto kombiyuutarkaaga, qaab kale oo loo sameeyo waa iyada oo loo marayo qalabka internetka ee lagu bixiyo bogag badan.
Gaar ahaan, kuwa aan kugula talineyno waa kuwa soo socda:
Waxaan marar badan kaala hadalnay qalabkan, loomana isticmaalo oo keliya in loo gudbiyo hal qaab dukumiinti mid kale; sidoo kale waad cadaadin kartaa PDF. Si tan loo sameeyo, waxay kuu oggolaaneysaa inaad doorato waxa riixaya tayada aad rabto, oo aad si toos ah ugu cadaadinaysid, mid ka timid Dropbox ama Drive, marka uma baahnid inaad wax soo dejiso.
Dabcan, markay yihiin feylal aad u ballaaran, mararka qaarkood waxay ku siin doontaa dhibaatooyin oo si fiican looma cadaadin karo maxaa yeelay waxay bixisaa qalad.
Qalab kale oo aan kuu sheegnay waa SmallPDF. Websaydhkani kaliya kuu oggolaan maayo inaad beddesho inta udhaxeysa qaababka, laakiin sidoo kale waad ku cadaadin kartaa PDf si fudud. Dabcan, sidii kii hore, waxaa jira waqtiyo haddii dukumintiga PDF uu ka badan yahay 100MB, cadaadiska aan la qaadin, maxaa yeelay mareegtu awood uma leh inay sameyso; laakiin haddii ay ka yaryihiin waa inaanay wax dhibaato ah kaa siin arrintaas.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad geliso feylka PDF-ga oo aad dhowr daqiiqadood sugto in la tuujiyo, in kasta oo aad sidoo kale si toos ah ugu cadaadin karto Google Drive ama Dropbox.
Khasaare kale ayaa ah inaad kaliya ku cadaadin karto laba faylal saacaddiiba; Isticmaalka qalabku wuu xadidan yahay, sidaa darteed haddii ay tahay inaad isku cadaadiso dhowr PDFs, ikhtiyaar kale (barnaamijyo) ayaa adiga kugu habboon.
Haddii aad raadineyso aalad taas oo ay u dheer tahay cadaadin, sidoo kale kuu ogolaaneysa inaad wax ka beddesho PDF-ka khadka tooska ah, markaa waa inaad isku daydaa PDFZorro. Dhab ahaantii, waa tifaftire PDF laakiin, ka mid ah shaqooyinkiisa, waa inaad cadaadin PDF.
Waxaad ka heli kartaa websaydhka laakiin sidoo kale waxaa jira qalab aad ku rakibi karto Google Chrome si faylasha ku keydsan Google Drive-ka la isku cadaadiyo.
Ku cadaadi PDF on Android ama iOS
Ugu dambeyntiina, haddii aad ka mid tahay kuwa u isticmaala kiniin ama taleefan casri ah shaqada, haysashada kombaresarada aan caadiga ahayn ee gacanta ku jira weligood wax ma yeelin, sax?
Waxaan kugula talineynaa waxyaabaha soo socda:
Qalabka PDF. Tani waxaa loogu talagalay Android, codsi aad ku cadaadin kartid PDF laakiin sidoo kale u qaybsan, isu geyn karto ama xitaa ugu beddeli karto qaabab kale ama aad xannibi karto. Dabcan, waxaad haysataa nooc bilaash ah iyo nooc pro ah, laakiin waa u qalantaa haddii aad wax badan u isticmaasho.
PDF kombaresarada macruufka. Tani waxay la mid tahay barnaamijkii aan hore uga soo hadalnay. Waa barnaamij aad ku cadaadin karto PDF labadaba si gooni gooni ah iyo dufcado. Waxaad sidoo kale u rogi kartaa PDF-ka ereyga.
Sida aad u aragto, waxaa jira fursado badan oo lagu cadaadiyo PDF sidaa darteed marka xigta ee aad u baahato waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah qalabkan si aad u gaarto. Waxaan kugula talineynaa, sida ugu macquulsan, markaad dhiseyso PDF-gaaga inaad isku daydo inaad isticmaasho sawirro tayo sare leh laakiin miisaan yar, iyo sidoo kale miisas ... si aysan u cusleyn (xitaa haddii ay tahay waqti gaaban waxaad u socoto) si loo kaydiyo, marwalba way u qalantaa).
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Isku soo ururi pdf
Sida loo tafatiro sawirrada Instagram